← दैनिक पाँच घण्टा भन्दा वढी फोनमा कुराकानी हुन्छ ः गायीका अञ्जु
चरित्र अभिनेता, द्वन्द्व निर्देशक तथा कला निर्देशक गोपाल भुटानीको निधन
चरित्र अभिनेता, द्वन्द्व निर्देशक तथा कला निर्देशक गोपाल भुटानीको आज निधन भएको छ । राजधानीको जनमैत्रि अस्पतालको उहाँको निधन भएको हो । ७८ वर्षका भुटानी आन्द्राको क्यान्सरवाट पिडीत थिए् । केहि दिन देखि झाडा पखाला समेत लागेकाले उनि झनै विरामी भएर गलेका थिए् । स्वयम्भु स्थीत धर्मपुत्रको घरमा वस्दै आएका भुटानीको आज विहान ११ वजे निधन भएको जनमैत्रि अस्पतालले जनाएको छ । एक दर्जन भन्दा वढी नेपाली चलचित्रमा द्धन्द निर्देशक रहेर काम गरेका भुटानीले धेरै नेपाली चलचित्र तथा टेलिसिरीयलमा समेत अभिनय गरिसकेका थिए् । सन १९४० को दशकमा मुम्वइवाट फिल्मी क्षेत्रमा प्रवेश गरेका भुटानी २०२९ सालमा मनको बाघ भन्ने चलचित्रबाट अभिनय यात्रा सुरू गरेका भुटानी चलचित्र क्षेत्रमा विभिन्न विशेषणले चिनिएका छन् । हुलाकीको सानो रोलबाट अभिनय यात्रा सुरू गरेका भुटानी द्धन्द्ध निर्देशक तथा कला निर्देशकको परिचयले चलचित्र उद्योगमा परिचित थिए । ६० वर्षअघि सिनेमामा खेल्ने रहर गरेर बम्बई पुगेका भुटानीले त्यहाँ बिँडी बनाएर बेचे र सर्कसमा घोडाको तबेला सफा गर्ने काम पनि गरे। सर्कसमा काम गर्दागर्दै चिनजान भएका अँधेरीको एमएनटी फिल्म स्टुडियोका कर्मचारीले उनलाई सिनेमामा काम गर्ने चाँजो मिलाइदिएका थिए। शुरुमा द्वन्द्वका दृश्यहरूमा फाट्टफुट्ट खेल्दाखेल्दै उनी काममा मिहिनेती एवं इमान्दार भएकाले पछि राम्रा भूमिका पाउन थाले र बम्बईको फिल्म नगरीमा छोटै समयमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भए। दारा सिंह, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, राजकपुर र शशि कपुरजस्ता कलाकारसँग धेरै सिनेमामा काम गरेका भुटानीद्वारा अभिनीत हकिकत, ललकार, ए रास्ते चीनके आदि हिन्दी चलचित्र ु सुपरहिट ु भएका थिए। उनी भन्छन्, “नायक बनेर खेल्न नपाए पनि खलनायकको भूमिकामा जमेको थिएँ।
नेपालमै सिनेमा बन्न थालेपछि यतै आएका भुटानीले नेपाली सिनेमामा द्वन्द्व, कला, भेषभुषा, शृङ्गारसम्बन्धी काम गरेका थिए। सयभन्दा बढी हिन्दी र झण्डै तीन सय नेपाली सिनेमामा काम गरेका छन् ।
आन्द्रको क्यान्सरवाट ग्रस्त कलाकार गोपाल भुटानीको वारेमा दशैमा तयार पारिएको यो सामग्री
कोही आउने आशमा गोपाल भुटानीको दशै
कलकत्ताबाट बम्बई पुग्न उनीहरूलाई ४० दिन लाग्यो । ‘स्टेसनैपिच्छे हामी रोकिन्थ्यौँ । विनाटिकट रेल चढ्थ्यौँ र टिटीले हामीलाई निकाल्थ्यो,’ भुटानीले विगतको यात्राप्रसंग सम्झे । जे होस्, बम्बई पुगे उनीहरू । सौकत आफ्नो धन्दामा लागे भने गोपाल आफ्नो सपनाको खोजीमा ।बम्बई टेकेको एक हप्तापछि उनी एकदिन जेमिनी सर्कस पुगे । फिल्मको नसा लागेको मान्छेलाई सर्कसको जादुमय संसार पनि कम्ती रोमाञ्चक लागेन । जेमिनी सर्कसको लाला नामको पालेलाई उनले यहाँ काम पाइँदैन ? भनेर सोधेछन् । उसले भोलि आइज भनेपछि उनी भोलिपल्ट हुर्दुराउँदै पुगे । लालाले उनलाई यामानको पहलमानकहाँ पुर्‍यायो । पहलमान जेमिनी सर्कसको मालिकको सहायक रहेछ । उसले- ए, केटा कहाँबाट आइस् भन्दा उनी चकित भए । ‘ऊ पनि नेपाली नै रहेछ । उसले मलाई के-के आउँछ, गरेर देखा भन्यो । मैले समरसल्ट (पल्टनबाजी) गरेर देखाएँ । किकसिक हानेर देखाएँ,’ भुटानी सम्झन्छन् । उनले सर्कसमा काम पाए । काम त पाए, तर हिरो बन्नका लागि सहायक सिद्ध नहुने काम पाए । ‘रिङमा घोडाले बिस्टायो भने गएर टिप्नुपर्ने । अनि, सर्कसको तबेला सफा गर्नुपर्ने । खानबस्नका टन्टै खतम हुने देखेर काम भने गरेँ ।’ हिरोका लागि आवश्यक शारीरिक तन्दुरुस्ती र मजबुती हासिल हुनेखालका अभ्यास खुब गरे उनले जेमिनी सर्कसमा । उनले काम गर्न थालेको आठ महिनापछि जेमिनी सर्कस रुस जाने भयो । तर, उनी भने गएनन् । ’cause, उनी त हिरो बन्न बम्बई गएका मान्छे, सर्कसको पुच्छर समातेर किन हिँड्थे र ?
बम्बईमा उनले खासै स्टारडम हासिल नगरे पनि फिल्म निर्माणका विभिन्न पक्षका भने राम्रा जानकार भए उनी । अब आफ्नै मुलुकमा केही गर्नुपर्छ भनेर उनी नेपाल फर्किए । ‘खासमा, मलाई नेपाल ल्याउने निर्देशक प्रकाश थापा हुन्,’ आफ्नो नेपाल आगमनको कारण बताए उनले । मनको बाँधमा हुलाकीको छोटो अभिनय गरेर नेपाली चलचित्र-जगत्मा प्रवेश गरेका उनी जीवनरेखामा द्वन्द्वनिर्देशन गरेर नेपालको पहिलो द्वन्द्वनिर्देशक भए । ‘त्यतिबेला फाइटर पाउनै गाह्रो ! खाइलाग्दो जिउडाल भएको जोसुकैलाई पनि लिएर काम गरियो,’ उनले त्यतिखेरको अप्ठ्यारो सुनाए । उनले ७० वटा जति चलचित्रमा द्वन्द्वनिर्देशन र सय जतिमा कलानिर्देशन गरेका छन् ।उनलाई सोधियो- नेपाली फिल्मका फाइटरहरूको भविष्य के ? ज्यान र उमेर छउन्जेल त गोदागोद गर्लान्, लड्लान्-पड्लान्, तर त्यसपछि के त ? भुटानीका विचारमा नेपाली फाइटरहरू चलचित्रमा अनुहार देखाउने सोख पूरा गर्न मात्रै आउने हुन् । ‘नेपालका फाइटरहरू ‘लल्लुपन्जु’ छैनन् । उनीहरू आर्थिक रूपले राम्रै छन्,’ भन्छन् भुटानी । कुटाइ खानु, शरीरलाई सन्तुलनमा राखेर लड्नु ‘ग्रेट आर्ट’ हो भन्ने भुटानीका अनुसार नेपाली फिल्मका फाइटरहरूले यौटा फाइट गरेको रु. तीन हजार लिन्छन् भने द्वन्द्वनिर्देशकहरू तीन/चार लाखसम्म कमाइरहेका छन् ।